यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू ! – Khabaarpati
January 6, 2021 January 6, 2021 goodmamLeaveaComment on यी ३ राशि भएका पुरुषलाई पाउन मरिहत्ते गर्छन् युवतीहरू !
काठमाडौँ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस्ता केही राशिहरू पनि छन् जुन राशि भएका पुरुषहरू प्रति महिलाहरू धेरै नै आकर्षित हुन्छन् । धेरै जसो युवतीहरूको आफ्नो उमेर परिपक्व भैसकेपछी आफ्नो जीवन साथीको बारेमा हर समय सोच्ने गर्दछन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
कि धेरै माया गर्ने असल जीवन साथी परोस् । यसो त केटाहरूले नसोच्ने भन्ने पनि होइन । केटाहरूले पनि आफ्नो जीवनमा एउटा दुख सुखमा साथ दिने राम्री श्रीमती परोस् भन्ने कुरा सोचिरहेका हुन्छन् ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार आज हामीहरू यस्ता केही राशिको बारेमा बताउन गएका छौ जुन राशि भएका महिलाहरू पुरुष प्रतिआकर्षित हुने गर्छन्।
सिंह राशि :सिंह राशी भएका पुरुषहरु आकर्षक हुनुको साथै प्रेमीका प्रति बफादार हुने गर्छन् । उनीहरु आफ्नो प्रमिकालाई खुसी बनाउन हर तरिकाले प्रयासरत हुने भएकाले युवतीहरु यो राशीका पुरुषसँग मरिहते गर्छन् । प्रेमिकालाई आफ्नो मुटु जतिकै ठान्ने भएकाले जस्तो सुकै हद पनि पार गर्न सक्षम हुन्छन् ।
कन्या राशि : कन्या राशी भएका पुरुषहरु निकै भावुक हुने गर्छन् । यो राशी भएका पुरुषहरुले आफ्नो प्रेमीका हरेक भावनालाई कदर गर्छन् । प्रेमीकालाई दुख नहोस भन्ने मनाशय बोकेका हुन्छन् । उनीहरुले आफ्नो प्रेमीकाको गल्तीमा सजिलै माफी दिन सक्ने खुबी भएका हुन्छन् ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
पत्रकारले लाइभमा समाचार पढ्दा पढ्दै बिच्चैमा टिभी मालिकलाई यस्तो भनेपछी (भिडियो हेर्नुस्)